Aurora Boreal: los mejores lugares del planeta para verlas | Meteorología en Red
Ebe kachasị mma na mbara ala iji lelee ọkụ ọkụ ugwu
Ugwu Ugwu bu ihe di egwu, n’ezie ihe kachasị mma nke mmadụ pụrụ ịhụ ma nwee obi ụtọ. Ọmarịcha agba ndị na-egbukepụ n’igwe n’abalị nwere ike bụrụ ihe na-enye ndị edemede na ndị nka ihe mmụọ.
Ọ bụrụ n’ịchọghị ịhapụ ya, chọpụta ihe ha bụ ebe kachasị mma na mbara ala iji lelee ọkụ ọkụ ugwu.
1 Kedu ka esi emepụta ọkụ ugwu?
2 Ihe nke »Aurora borealis»
3 Oge kacha mma iji hụ Ọwụwa Ugwu
4 Ebe a na-ahụ maka ugwu ugwu
Kedu ka esi emepụta ọkụ ugwu?
Tupu m mata ebe m ga-aga hu ya, Zọ kacha mma iji mara otu esi arụpụta tupu oge eruo? N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike iji anya ka mma hụ ya. Ya mere ka anyi bido.
Dị ka anyị si mara, anyanwụ na-agbapụta ụzarị anyanwụ n'akụkụ niile, ụfọdụ n'ime ha na-erukwa na mbara ụwa. Mgbe ụzarị ndị a na-abanye na okporo osisi ndị ahụ, ma ndị ugwu ma ndịda, na ndọta ụwa, a mgbasa ozi ọkụ ma ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ n'ime ikuku.
Iji kọwaa nke ọma, na mgbe niile dịka nkwupụta ahụ siri bụrụ nke a nabatara, auroras kpatara a urughuru radieshon na-abịa site na kpakpando eze. Ma electron na proton na-esite na ya na-eduhie site na ala ndọta ụwa. Ọ bụrụ na ihe ndị ahụ na-aga n'ụzọ ziri ezi, oghere magnetik ga-abụ ọrụ maka itinye ha gburugburu na nke ọ bụla nke magnetik, si otú a na-adaba na nkwekọrịta nke ihe ikuku nke, n'ikpeazụ, ga-enwupụta ìhè.
Ihe nke »Aurora borealis»
Ọ bụrụ na ihe ngosi ahụ n’onwe ya magburu onwe ya, ihe aha ya pụtara abụghị n’azụ. O wee pụta na "Aurora" bụ aha chi nwanyị Rom nke chi ọbụbọ, na "boreal" -boreas - bụ okwu sitere na Greek nke pụtara ugwu. Yabụ, anyị nwere nke ahụ »Aurora Borealis» pụtara ihe Northern Dawn (ma ọ bụ Northern Lights). Ọ dị mma ọ bụghị ya?
Oge kacha mma iji hụ Ọwụwa Ugwu
Agbanyeghị na ihe ịtụnanya a nwere ike ime n’afọ, ọnwa kacha mma Jenụwarị na Febụwarị, nke bụ mgbe okpomọkụ dị ala. N'ezie, ị ga-ekpo ezigbo ọkụ ịnụ ụtọ ya.
Bụlagodi, site na October ruo March ha na-eme ugboro ugboro, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ike ịga ọnwa abụọ ahụ, ịnwere ike ịga nke ọ bụla n'ime anọ ndị ọzọ.
Ebe a na-ahụ maka ugwu ugwu
Ugbu a anyị matara otu esi emepụta ha na nke bụ ọnwa kacha mma, ka anyị hụ, ugbu a, ebe anyị ga-aga ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnụ ụtọ abalị kachasị mma nke ndụ anyị.
Na Alaska, enwere ike ihu ugwu ugwu site na ugwu n’oge onwa November na Jenuari, mgbe ha di n’etiti oge oyi. Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị na-aga, ị kwesịrị ịma naha na-agagharịkwa n’oge oyi ndi na acho ihe ebube ndia.
N’oge udu mmiri, a na-ekpuchi mbara igwe ndị Canada na ọkụ ndị ahụ ha ga-eme gị obi abụọ ma ọ bụrụ na ị na-arọ nrọ ma ọ bụ na-amụ anya. Na mbu ị ga-ahụ ihe niile gbara ọchịchịrị, mana n'oge na-adịghị anya, eserese na ọkụ ịgba egwu ga-apụta nke ga-apụta na nkuzi mmiri dị na mpaghara ahụ.
Ọ bụrụ na mgbakwunye na ịbụ onye hụrụ ọkụ ọkụ n'anya, ọ na-amasị gị foto, gaa Greenland n'oge oyi ma enwe a nna ukwu na klas na ọkachamara-echebe nke ahụ ga-akụziri gị ka ị nweta ihe oyiyi kachasị mma nke abalị.
Ugwu Northern pụtara na Iceland n’agbata ngwụcha ọnwa Ọgọstị na etiti Eprel, nke bụ mgbe okpomọkụ dị ala ma abalị na-agba ọchịchịrị. Jide n'aka na igwefoto gị ga-adị njikere site na elekere 22, dịka nke a bụ mgbe ha nwere ike ime.
Norway enweghị ike ịnọ. Obi abụọ adịghị ya, ebe kachasị mma bụ Arctic Circle, ya mere iji hụ ha, ka ị na-aga n'ihu na ugwu, ka ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ Ugwu Ugwu. N'ihe banyere Norway, ị ga-aga n’etiti Septemba 21 ruo Machị 21, nke ga-abụ mgbe ị nwekwara ike ịga sledding ma ọ bụ na snowmobile.
N'akụkụ a nke ụwa a na-ekwu na Northern Light na-eme ka ọ pụta karịa ma ọ bụ na-erughị Abalị 200 n’afọ, ọnwa ndị kachasị mma dị n'etiti Septemba ruo Machị.
N'agbanyeghị, lebara anya nke ọma n'ihi na ndị ọkachamara na-adọ aka na ntị na ha nwere ike ịdịruo ọtụtụ awa ... ma ọ bụ sekọnd.
Na Siberia iji hụ ihe ngosi dị ka nke a, ọ ga-abụ nke ukwuu, oyi, mma oyi okpomọkụ nwere ike mfe idebe n'okpuru -30ºC. Mana ọ bara uru iyi ọtụtụ ikpo ọkụ iji hụ ya.
Iji mee ka abalị ahụ bụrụ ihe a na-agaghị echefu echefu, anyị enweghị ike ichefu ihe ndị a:
Yiri uwe na-ekpo ọkụ (gụnyere uwe aka, ịchafụ na okpu)
Mee ka igwefoto dị njikere foto na / ma ọ bụ vidiyo
Na n'ezie anya n'ihi na a saịtị na-enweghị ìhè mmetọ
Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịga njem naanị gị na enweghị nsogbu, ana m adụ gị ọdụ ka gị na onye ị hụrụ n'anya gaa. N'ụzọ nke a, ahụmahụ ahụ ga-abụ ọbụna ihe na-akwụghachi ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebe kachasị mma na mbara ala iji lelee ọkụ ọkụ ugwu
Ike dị egwu nke El Niño '' Godzilla ''
Ebe 8 ebe mmiri ozuzo adighi-ada ada